ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Programmable Logic Controller (PLC) အကြောင့် အခြေခံ လေ့လာ သင်ယူချက် - ၄
Programmable Logic Controller (PLC) အကြောင့် အခြေခံ လေ့လာ သင်ယူချက် - ၄
Programmable Logic Controllers - Chapter3- Logic Concept
PLC များ၏အလုပ်လုပ်ပုံ နှင့် အသုံးပြုပုံများကို နားလည်ရန်အတွက် Logic concept ကို ပထမဦးစွာ နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ အခြေခံ Logic function ၃ မျိုးဖြစ်သည့် AND ၊ OR နှင့် NOT တို့ကို ကွဲပြားအောင် Electric Circuit များ နှင့် Ladder Diagram များနှင့်တကွ သေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ ထို Logic function ၃ မျိုးကိုအခြေခံ၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့် Control decision များမှစ၍ ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးသည့် Control Decision များအထိ တည်ဆောက်ထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Boolean algebra ၏ အခြေခံ သဘောတရားများ (fundamental) နှင့် ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Operator များကိုဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက် Boolean Logic နှင့် Logic contact Symbology တို့၏ ဆက်သွယ်ပုံများကို ရှင်းလင်းထားသည်။ ဤအခန်းကိုကျေညက်စွာလေ့ လာပြီးလျှင် PLC processor များနှင့် ယင်းတို့၏ programming Device များကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်လိမ့််မည်။
၃.၁ The Binary concept
Binary concept သည် အိုင်ဒီယာအသစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ Binary concept ကို ရှေးယခင်ကတည်းက စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ-မီးလုံး (သို့) မီးချောင်း(Light)သည် ပွင့် (ON) နေနိုင်သည်။ ပိတ် (OFF) နေနိုင်သည်။ ခလုပ်(switch) သည် Open ဖြစ် နေနိုင်သည်။ Close ဖြစ်နေနိုင်သည်။ မော်တာ (motor) တစ်လုံးသည်မောင်း(running) နေနိုင်သည်။ ရပ်(stop) နေနိုင်သည်။ Digital System များတွင် အခြေအနေ ၂ မျိုး(two state condition) သာရှိနိုင်သည်။ signal ရှိခြင်း (Signal activated) (သို့) မရှိခြင်း (not activated)၊ high (သို့) Low ၊ ON (သို့) OFF ၊ Open (သို့) Close စသည့်တို့ကဲ့သို့ အခြေအနေ ၂ မျိုးအနက်မှ တစ်ချိန်တွင် တစ်မျိုးသာဖြစ်နေနိုင်သည်။ ထို Two State concept (Binary concept) သည် Decision များချရန် အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ အခန်း ၂ တွင်ဖော်ပြထား သည် Binary Number System ၏သဘောများကို အခြေခံသည်။ Binary Number System (သို့) Binary concept သည် PLC များ၏ function Block များပြုလုပ်ရန် နှင့် Digital Computer များ၏ အခြေခံ(fundamental) သဘောတရားများ ဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်တွင် Binary 1 သည် Signal ရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ Binary0သည် Signal မရှိခြင်း (absence of signal) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Digital System များတွင် ဤအခြေအနေ ၂ မျိုး(two state) ကို မတူညီသည့် Voltage Level ၂ ခုဖြင့် ဖော်ပြသည်။ +V volt နှင့် 0V volt တို့ကို Table 3-1 တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Volt တစ်ခုသည် တခြား Volt တစ်ခုထက် အပေါင်းဓါတ်အား (သို့) အဖိုဓါတ်အား (more positive) ပိုများသည်။ တစ်ခါတရံ Binary 1 (သို့) Logic 1 ကို TRUE ၊ ON ၊ HIGH စသည် အဓိပ္ပါယ်များ အဖြစ် ရည်ညွှန်းပြောဆိုပြီး Binary0(သို့) Logic0ကို FALSE ၊ OFF ၊ LOW စသည့် အဓိပ္ပါယ်များ အဖြစ်ရည်ညွှန်း ပြောဆိုသည်။
၃.၂ Logic Function
Table 3-1 တွင်ဖော်ပြထားသည့် more Positive Voltage ကို Logic 1 အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ပိုနည်းသည့် (Less positive voltage)ကို Logic0အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ မိမိနှစ်သက်သလို အဆင်ပြေသလို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Table 3-2 တွင် Logic0ကို positive voltage level အဖြစ် ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်သည်။ Occurrence of event တစ်ခုရှိခြင်းကို Logic0ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ Non Occurrence of event ကို Logic 1 ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ Less positive voltage level ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ Table 3-1 မှ Positive Logic သည် အသုံးပြုနေကျပုံစံ (conventional) မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် Negative logic သည် application များအတွက် အဆင်ပြေ စေသည့် (convenient) နည်းမျိုးဖြစ်သည်။
Binary concept သည် physical quantities (Binary variables) များ အခြေအနေ ၂ မျိုး (two state) ကို0နှင့် 1 ဖြင့်ဖော်သည်။ အခြေအနေ ၂ မျိုးအနက် တစ်ချိန်၌ အခြေအနေတစ်မျိုးသာဖြစ်နိုင်သည်။ ၂ခုထက်ပိုသည့် Binary variable များပေါင်းစပ်ပြီး ရရှိသည့်ရလာဒ်ကို True 1 (သို့) False0အခြေအနေ တစ်မျိုး မျိုးဖြင့်ဖော်ပြပုံ ဆက်လက်လေ့လာမည်။ PLC များသည် logical statement များကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ် (make decision) ကြသည်။ PLC များသည် Digital equipment များ ဖြစ်ကြသောကြောင့် AND ၊ OR နှင့် NOT စသည့် အခြေခံ (fundamental) Logic function ၃ မျိုးကို အခြေခံ၍ Operation များပြုလုပ်ကြသည်။ ထို function များပေါင်းစပ်ပြီး Binary Variable များကို Statement အဖြစ်တည်ဆောက်ကြသည်။
Function တိုင်းတွင် စည်းကမ်းချက် (rule) များရှိကြသည်။ ထိုစည်းကမ်းချက် (rule) များအရ ရလာဒ် (result) ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတ (Symbol) များရှိကြသည်။ နားလည်မှုရှင်းလင်းစေရန်အတွက် ရလာဒ် (result of statement) ကို output ဟုသတ်မှတ် ခေါ်ဆိုသည်။ output ကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ (Y) ဖြင့်သတ်မှတ်ဖော်ပြသည်။ Statement များ၏ အခြေအနေ(Condition) များကို input (A နှင့် B) များဟု သတ်မှတ်သည်။ input နှင့် output ၂ ခုစလုံးကို အခြေအနေ ၂ မျိုး (two state variable) ဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။
၃.၂.၁ “AND” Function
ပုံ 3-1 သည် AND gate တစ်ခု၏ သင်္ကေတ (Symbol) ဖြစ်သည်။ AND function ကိုပုံဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ Input များအားလုံး True (1) ဖြစ်မှသာ AND output သည် True (1) ဖြစ်သည်။
The AND output is True (1) only if all inputs are True (1).
ဥပမာ - ၃-၁
Input ၂ ခုဖြစ်သည့် Push Button 1 (BP1) နှင့် Push Button2(BP2) နှစ်ခုတို့ တစ်ပြိုင် နက်တည်း ဖိ (Press) မှသာလျှင် (ON ဖြစ်မှသာ) Alarm Horn မှအသံမြည်စေရန်အတွက် Logic gate ၊ truth Table နှင့် Electric Circuit ၊ Ladder Diagram (Circuit ) များဖြင့် ဖော်ပြပေးပါ။
၃.၂.၂ The “OR” Function
ပုံ 3-3 သည် OR gate တစ်ခုကို သင်္ကေတ (Symbol) ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ OR function ကို ပုံဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
The OR output is True (1) if on or more inputs are True (1).
OR gate ၏ input များအားလုံးအနက်မှ အနည်းဆုံး input ၁ ခု True ဖြစ်လျှင် output သည် True (1 ) ဖြစ်သည်။
AND function (AND Gate) နှင့် OR function (OR Gate ) တို့တွင် input ပေါင်းများစွာရှိနိုင် သော်လည်း output ၁ ခုသာရှိမည်။ ပုံ 3-4 တွင် OR function ၏ True Table ကို ဖော်ပြထားသည်။ input များအားလုံး၏ ဖြစ်နိုင်သည့် Combination ကိုအခြေခံ၍ output Y ကိုထုတ်ပေးထားသည်။
Input ၂ ခုဖြစ်သည် Push Button (BP1) နှင့် Push Button (BP2) တို့အနက် မည်သည့် Push Button တစ်ခုခု နှိပ်လျှင် (ON ဖြစ်လျှင်) Alarm Horn အသံထွက်စေမည့် Logic Gate ၊ true tableနှင့် Circuit တို့ရေးဆွဲဖော်ပြပါ။
၃.၂.၃ The “NOT” function
ပုံ 3-5 NOT function ကို သင်္ကေတ (Symbol) ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ NOT function ၏ input မှာ FALSE (0) ဖြစ်လျှင် output သည်TRUE (1) ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် input မှာ True (1) ဖြစ်လျှင် output သည် FALSE (0) ဖြစ်သည်။ NOT Gate ၏ Operation မှာ input ၏ state ကိုပြောင်းပြန်(inverse) လုပ်ပေးရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် NOT Gate ကို inverter ဟုလည်းခေါ်သည်။
တခြားသော AND function နှင့် OR function များနှင့်မတူသည့်အချက်မှာ NOT function တွင် input တစ်ခုတည်း သာပါရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ NOT function ကို တစ်ခုတည်း အသုံးပြုလေ့မရှိပေ။ AND gate (သို့) OR gate တို့ဖြင့်တွဲ၍ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ပုံ ၃-၆ တွင် NOT Operation နှင့် ယင်း၏ true table ကိုဖော်ပြထားသည်။ A အပေါ်တွင်ဘား ( Bar) ကလေးတင်၍ Ᾱ အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းသည် NOT A ကို ရည်ညွှန်းသည်။
NOT function အလွယ်တကူသိမြင်နိုင်ရန်(Visualize လုပ်ရန်) ခဲယဉ်းသည်။ AND နှင် OR တို့၏ function ကို သိမြင်နိုင်ရန်(Visualize လုပ်ရန်) လွယ်သည်။ သိလွယ်၊မြင်လွယ်သည်။ သို့သော် NOT function သည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊ အလွန်အသုံးဝင်ကြသည်။
အစပိုင်းတွင် ရှင်းပြထားသည့်အချက် (၃) ချက်
(၁) 1 သို့0မိမိနှစ်သက်သည့်အတိုင်းရွေးချယ်ပါ။
(၂) logic 1 သည် ပုံမှန်အားဖြင့်(များသောအားဖြင့်) TRUE ၊ HIGH ၊ ON ဖြစ်သည်။ logic 1 သည် Device တစ်မျိုးမျိုးကို Activate လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဥပမာ- Output Y=1 ဖြစ်လျှင် မော်တာကို မောင်းရန်ဖြစ်သည်။
(၃) logic0သည် ပုံမှန်အားဖြင့် (များသောအားဖြင့်) FALSE ၊ LOW ၊ OFF ဖြစ်သည်။ logic0သည် device တစ်မျိုးမျိုးကို deactivate လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ- Output Y =0 ဖြစ်လျှင် မော်တာကိုရပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုအခြေအနေကို ပြောင်းလိုလျှင် NOT function ကိုသုံးသည်။ ဥပမာ- logic0သည် Device တစ်မျိုးမျိုး Active လုပ်လိုလျှင် NOT function ကို အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ- output Y=0 ဖြစ်လျှင် မော်တာကိုမောင်းရန်ဖြစ်သည်။ NOT function သည်အသုံးဝင် သည်။
(က) NOT ကိုအသုံးပြုသည်။ logic0(low condition) ဖြစ်လျှင် Device တစ်မျိုးမျိုးကို Active လုပ်ရန်
(ခ) Logic 1 (High Condition) ဖြစ်လျှင် Device တစ်မျိုးမျိုးကို deactivate လုပ်ရန်အတွက် NOT ကိုအသုံးပြုသည်။
အောက်တွင် NOT function ကိုသုံးထားသည့် ဥပမာ ၂ ခုကိုဖော်ပြထားသည်။
NOT function ကို AND နှင့် OR function များဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိကြသော်လည်း ပထမဥပမာတွင် NOT function တစ်ခုတည်းကို သာသုံးထားသည်။